CDES | Centre for Development and Ethnic Studies
+95 (0)9 425 705 270
Federal Learning School (Batch-1)
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် read more →
ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နှင့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ မတ်လ ၉ ရက်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်
NCA မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မတော်ရပ်ဆိုင်းပေးမယ်
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် မပျက်စီးစေရေး ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးရန် CNF ဒုဥက္ကဋ္ဌ မေတ္တာရပ်ခံ
Leadership and Unity Building in the Midst of Political Transition in Burma Speeches 02-08-2017 Download PDF → Read Detail
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲမှ ဒေါက်တာ ဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်း၏ တင်ပြဆွေးဆွေးချက်။ Speeches 12-08-2017 Download PDF → Read Detail
Speech delivered by Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar on Government’s Efforts with Regard to National Reconciliation and Peace Speeches 19-09-2017 Download PDF → Read Detail
Statement by His Excellency U Henry Van Thio, Vice-President of the Republic of the Union of Myanmar, at the General Debate of the 72nd Session of the United Nations General Assembly Speeches 21-09-2017 Download PDF → Read Detail
၇၂ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ပြောကြားသည့် အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ မိန့်ခွန်း Speeches 21-09-2017 Download PDF → Read Detail
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ချုပ်ဆိုခြင်း(၂)နှစ်ပြည့်၊ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြောကြားသည့် နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား Speeches 15-10-2017 Download PDF → Read Detail
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၂) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် ကေအဲန်ယူ- ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး ပြောကြားသည့် အမှာစကား Speeches 15-10-2017 Download PDF → Read Detail
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၂)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်နေ့ အခမ်းအနားတွင်ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း Speeches 15-10-2017 Download PDF → Read Detail
The Opening Speech by State Counsellor at Second Anniversary of Signing Nationwide Ceasefire Agreement Speeches 15-10-2017 Download PDF → Read Detail
ဇန်န၀ါရီလ ၁၁ ရက်မှ ၁၂ ရက်ထိ ကျင်းပမည့် PPST အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး၏ အဖွင့်မိန့်ခွန်း Speeches 11-01-2018 Download PDF → Read Detail
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှစ် (၇၀) ပြည့် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း Speeches 20-02-2018 Download PDF → Read Detail
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားသည့် နိုင်ငံတော် အစိုးရ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု (၂)နှစ်ပြည့် မိန့်ခွန်း။ Speeches 01-04-2018 Download PDF → Read Detail
■နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အမှာစကား - ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှု ပူးတှဲကျောမတီ (UPDJC) - ဥက်ကဋ်ဌ■ Speeches 12-03-2020 Download PDF → Read Detail
၁၈ ကွိမျမွောကျ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှု ပူးတှဲကျောမတီ - UPDJC အစညျးအဝေးတှငျ ဒေါကျတာ ဆလိုငျးလနျြမှုနျးဆာခေါငျး ပွောကွားသညျ့ အမှာစကား Speeches 12-03-2020 Download PDF → Read Detail
(၁၉) ကွိမျမွောကျ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှု ပူးတှဲကျောမတီ (UPDJC) အစညျးအဝေး Speeches 17-08-2020 Download PDF → Read Detail
No. 635/E, Yoma Yeiktha Lane, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon11041, Myanmar.
Peace & Reconcilation
Saturday School of Federalism :
Copyright ©2022 Centre for Development and Ethnic Studies. All Rights Reserved. | Design and Developed By CDES & Pro-X.